विश्वकप रक्स - युवा मन - प्रकाशितः असार १४, २०७१ - साप्ताहिक
न भिसा दिने हुन्, न टिकट काटिदिने हुन्, न 'तैँले हाम्रो टिमलाई सपोर्ट गरिदिइस्, धन्यवाद' भन्ने हुन्, तैपनि फ्यान भा'का छन्। जे होस्, विश्वकपमा सम्पूर्ण नेपाली रमा'का छन्। आफूलाई मन पर्ने टिमको जर्सी पनि किनेर लाएकै छन्। साथीभाइसँग बाजी पनि ठोक्न भ्याएकै छन्। मध्यरातमा मस्त निद्रामा भएका छिमेकीलाई चर्को स्वरले 'गो.............ल' भनेर पनि ब्यूँझाएकै छन्। मिनेट मिनेटमा फेसबुक स्ट्याटस र टि्वट पनि अपडेट गरेकै छन्।
त्यसैले त फुटबलभन्दा फेसबुक र टि्वटर रोचक भा'छ। फुटबलमा त केही गोलमात्र हुन्छ, तर फेसबुक र टि्वटरमा अनगिन्ती गोल गर्छन् मान्छेहरू। स्ट्याटस र टि्वटका गोल। सबका प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भएका छन्। कभर फोटो चेन्ज भएको छ। आफ्नो ठाउँमा आफूलाई मन पर्ने खेलाडीको फोटो हालेका छन्। हारेका टिमका सपोर्टरहरू मौन बस्छन्, मानौँ त्यो गेम उनीहरूकै कारणले हारेको हो। जितेकाका सपोर्टरहरू हारेकाका सपोर्टरको धज्जी उडाउँछन् कत्ति न आफैँले खेलेर जिता'को जस्तो। चियापसलदेखि क्लासरुम, अफिसदेखि पार्क, माइक्रोबसदेखि अस्पतालसम्म चर्चा छ त केवल विश्वकपको।
'यो विश्वकप त सधैँ भए पनि हुने,'
'अघिपछिभन्दा तीन गुना बढी बियर बिक्न थालेको छ।' रक्सीपसले साहू मख्ख पर्दै भन्छन्। घरज्वाइँलाई खानको धन्धा भन्या यही होला।
एक जना भाइले रिन काढेर इटालीको जर्सी किने। तिनै भाइका साथीले एक दिनका लागि जर्सी उधारो मागे। फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नलाई।
'कुन टिम मन पर्छ भाइ ? जर्सी त इटालीको पैँचो मागेर लगायौ।'
'हीहीही,' हाँस्दै ब्राजिलको जर्सीजस्तै कलरको दाँत देखाउँदै उसले भन्यो, 'यो देखाउनलाई मात्र हो। खासमा मलाई फुटबलमा रुचि नै छैन।'
फुटबलमा ठ्याप्पै रुचि नभएका ती भाइ क्रिकेटका भने क्रेजी फ्यान रै'छन्। दुनियाँलाई देखाउन चैँ फेसबुकमा फोटो हाल्न लागेका रे। मानौँ त्यसरी फोटो हालेबापत उसलाई कतैबाट भत्तास्वरूप केही शुल्क प्राप्त हुँदैछ। यस्तो लाग्छ, सडक-सडक, चोक-चोकमा विश्वकप खेलाडीहरूका क्लोनिङहरू कुदिरहेछन्। राता, सेता, पहेँला, नीला। क्या कलरफुल भा'को देश पनि। असारमै होली आएजस्तो।
साथीचैँले उसको जर्सीमा चोरी औँला देखाउँदै बुझाउँछ, 'हेर् त, जर्सीभरि बेसार लागेको।' 'अब फलानो देशको जर्सी किन्दा मास्क फ्री। हारको लज्जाका लागि मुख छोप्न।' फेसबुकमा आधा रातमै आइहाल्छ यस्तो स्ट्याटस जब आफूले सपोर्ट गरेको टिमले जित्छ। अनि हारेको टिमको धज्जी यसरी उडाउँछन्। 'त्यो मेक्सिकोको गोलकिपर राम्रो भएर मात्र, नत्र हाम्रो ब्राजिलले पक्का जित्थ्यो।'
सबै बलेकै आगो ताप्ने। प्राय: समर्थकहरू कि त ब्राजिल, कि जर्मनी, कि अर्जेन्टिना कि इंग्ल्याण्ड रे। बिचरा इरानको सपोर्टर कोही छैन। कोस्टारिकाको जर्सी कसैले लगाउँदैन। मेस्सी, नेयमार र रोनाल्डोकै दिन छन्, जापानका खेलाडीलाई कसैले मान्छे गन्दैन। क्यामरुनका खेलाडीको नाम कसैले जान्दैन। होन्डुरस र इक्वेडरको गेम कसले पो हेर्‍यो होला र ?
'अस्ट्रेलियाका समर्थकहरूले आई.ई.एल.टी.एस. दिनु नपर्ने।' अर्को स्ट्याटस देखियो प्वाक्क।
धेरैको क्रियटिभिटी यस्तै बेलामा देख्न पाइन्छ।
एउटाले कसैको फोटो सेयर गरिदियो— जसले डिडिसिको दूध खान्छ, त्यो अर्जेन्टिनाको खाँटी समर्थक। फोटोमा थियो डिडिसिको दूधको प्याकेट र अर्जेन्टिनाको जर्सी। अझ ब्राजिल र मेक्सिकोको गेममा त दुवै देशको नाउँको सुरुका अक्षरसँग मिल्ने महिलाको वस्त्रको फोटोसमेत अपलोड गर्न भ्याए।
अर्को फोटो थियो पाइलट चुरोटको खोल र जर्मनीको जर्सीको कम्पेरिजन। वाह ! क्या दुरुस्तै। कस्तो क्रियटिभिटी !!
जाबो डेढ घण्टाको म्याचका लागि हरेक रात करोडौँ निद्राको बलि चढ्छ। कत्रो उत्साह ! कत्रो रुचि ! के छ हँ विश्वकपमा ? आधा रातसम्म ननिदाई म्याच हेर्न बसेको छोरोलाई भोलिपल्ट उँघ्दै गरेको देखेर बूढी आमा सोध्छिन्। आफ्नै धुनमा अर्धनिद्राकै बोलीमा कुनै साथीलाई उत्तर दिएझैँ ऊ उत्तर दिन्छ, 'विश्वकप रक्स।'